Ngathi - Shandong Surmount Hats Co., Ltd.
Oonobumba bezemidlalo bangaphandle
Izikhuselo zeVisor yelanga
Shandong Surmount Hats Co, Ltd. eyasekwa ngo-2005 kwaye ibekwe kwisiXeko saseRizhao, isixeko esihle sonxweme kwiPhondo laseShandong, China. Njengoko kufutshane Qingdao port kunye Rizhao port, ukuthuthwa Kulula kakhulu. Inkampani yethu inabasebenzi abamalunga ne-300 egubungela indawo engaphezulu kwe-13,000 yeemitha zesikwere, kunye nenkunzi ebhalisiweyo yezigidi ezili-10 kunye neeasethi ezikhoyo ezingaphezulu kwezigidi ezingama-20. Inkampani yethu ineendibano zocweyo zale mihla, izibonelelo ezincedisayo, izixhobo zemveliso eziphambili kunye namandla ezobugcisa.
Inkampani yethu ikakhulu ukuvelisa iminqwazi emele, iminqwazi ukunyuka intaba, iminqwazi baseball, iminqwazi zomkhosi kunye iminqwazi, iminqwazi ezemidlalo, iminqwazi fashion, visors neminqwazi zentengiso. Kwaye sinokwamkela ii-odolo ze-OEM ngokweemfuno zabathengi. Ngenxa yoyilo loyilo, izimbo ezisefashonini, ubuchwephesha obuphezulu kunye nezinto ezisemgangathweni ezikrwada, iimveliso zethu zithandwa kakhulu kwimarike. Ngokukodwa zithunyelwa eKorea, eJapan, eYurophu naseMelika, kwaye zifumene amagqabantshintshi alungileyo kubuninzi babasebenzisi.
Sinyanzelisa ithiyori yeshishini "uMthengi nguThixo, uMgangatho bubomi", jonga "Ukuzimela ngokwakho; Ukufuna ukugqwesa" njengomoya oqinisekileyo, oqinisekisa umgangatho wodidi lokuqala, kunye nokwenza uphawu lodidi lokuqala. Ngumnqweno wabo bonke abasebenzi benkampani yethu ukwenza ukuba abathengi baneliseke.
Inkampani ngokunyanisekileyo inethemba lokuphumelela kunye nentsebenziswano kunye nawe
Yiba ngumvelisi womnqwazi kunye nomthengisi
Ukusukela ukugqwesa, ubuvulindlela kunye nokuyila, ukwabelana ngesishwankathelo, umthengi kuqala, ukuphumelela intsebenziswano.
Imfezeko, imbeko kunye nobungcali, abathengi bahlala bechanekileyo.
Ukuziphatha kukuphambili kunye nokuzimisela ukunika. Banomdla, bazinikele, kwaye bamanyene.
Iziphumo zibalaseleyo, izizathu zizezesekondari.
Zimisele kwaye ulumke.
Wonke umsebenzi unesicwangciso.
Zonke izicwangciso zineziphumo.
Zonke iziphumo zinoxanduva.
Lonke uxanduva kufuneka luhlolwe.
Konke ukuhlolwa kunomvuzo kunye nezohlwayo.
Njengomvelisi weminqwazi yobungcali, sidlulile ukuqinisekiswa kwenkqubo esemgangathweni ye-ISO9001，Ukuchongwa kwe-WRAP kunye novavanyo lwamandla okushishina akhutshwe yi-Bureau Veritas, eyinkokeli yehlabathi kuhlolo lokuthobela kunye neenkonzo zokuqinisekiswa.
Shandong Surmount Hats Co., Ltd.Ukuthengiswa kweShishini: